Misaritaka loatra ny hetsi-panoherana sabotsy!
2009-03-20 @ 23:17 in Politika
Be ireo mihevitra ny hihetsiketsika ny sabotsy 21 marsa 2009 izao. Kely fanantenana ihany aho satria karazany hoe ora farany vao naheno ny vaovao sasany. Mikorontana ihany koa ny zava-drehetra. Ny sasany milaza ho etsy Ambohijatovo, ny hafa eny anoloan'ny 13 mey, misy ny eny amin'ny 13 mey avy hatrany. Ao ireo manao hoe eo anoloan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, misy ny miteny eny anoloan'ny Masoivoho frantsay. Dia aiza ihany izany no izy? Hita tokoa hoe "menalamba" ka lasa samy te-hitarika noho ny hafanam-po. Mbola manana fahabangana lehibe noho izany ny manao ity hetsi-panoherana ny fitondrana tetezamita ity: ny fifandaminana sy ny famondronana ny hery!
Ekeko tokoa fa tsy misy afaka manakana ny hetsika kasaina atao Sabotsy nefa misy ny fotoana iray izay tsy azon'ny sasany sakanana dia ny Alahady 29 marsa ho avy izao. Ny eto Antananarivo nantenaiko ihany mba hanao fotoan-dehibe ny FFKM saingy asa angaha inona no mahazo azy. Maninona ny eto Antananarivo raha amin'io alahady io eny Mahamasina miaraka amin'ny FJKM? Misy iomanana tsara koa amin'izay fotoana izay fa toa ady koropaka mety ho afo-mololo fotsiny izao fisaritahana izao ka tsy hahavitan-javatra. Enga anie mba hahay hivondrona isika ary samy hametraka ny 29 marsa any amin'ny misy antsika tsirairay avy ho fotoan-dehibe. Aoka noho izany mba hahay hiomana tsara isika fa tsy entin'ny fo ka mety hahavita zavatra tsy mety sanatrian'izany! tsy aleo ve atomboka amin'ny fotoam-pivavahana ity, eny fa na dia mety ho reformé fotsiny aza ny fotoana amin'ny Alahady 29 marsa 2009 dia izay indrindra ny fotoana ivoriana. Azo atao ihany koa anefa ny miaraka amin'ny an'ny FFKM tokony hisy ny tolakandro, satria fanao isan-taona izany! Tolo-kevitra ampahibemaso ny ahy ry zareo fa anareo no mandinika!
jentilisa, 21 marsa 2009 amin'ny 01:46